Ingabe I-Wall Le Amamitha Amabili Ayisikwele, Ithuthukisa Kakhulu Umklamo!
Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Ingabe I-Wall Le Amamitha Amabili Ayisikwele, Ithuthukisa Kakhulu Umklamo!
2020 / 10 / 23 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 1167 0
Imindeni emisha ngokwengeziwe iyakwenqaba ukufana futhi ifuna ukuzakhela eyayo uma kukhulunywa ngokuhlobisa amakhaya ayo.
Eminyakeni yamuva nje, ngibonile ukuthi igagasi lezinto ze-arch, elivela ekwakhiweni kwezakhiwo zaseRoma, livele buthule ekwakhiweni kwekhaya.
Ekuqaleni, lesi sakhiwo se-arch sasetshenziswa kakhulu ezikhathini zasendulo ngoba umthamo omkhulu wokulayisha wawudlula kakhulu umthwalo okwakungathwala isakhiwo.
Namuhla, kuvame ukutholakala ekwakhiweni kwangaphandle nangaphakathi kwezakhiwo.
Isibonelo, ku- "Hidden Corner", okwakudume kakhulu esikhathini esedlule, yomibili indawo yokungena ehholo lokudlela kanye nomnyango we-arched osendaweni yasekhishini uletha umuzwa wokuvuna.
Ubuhle bemigqa yejiyomethri, kuhambisana nohlelo lombala oluphuphayo, buthandwa ngabaqambi bazo zonke izinhlobo.
Lo mklamo, obudume isikhashana eminyakeni yama-80s / 90s, ubuya ngempela kulezi zinsuku.
Futhi, ukwakheka kwe-arch okuthuthukisiwe kulula, okuhlala isikhathi eside futhi kuhlanganiswe nokuguquguquka okukhulu. ……
Esitolimende sanamuhla, sizokhuluma nawe ngezinto ezimbalwa - yini ekhangayo ngaleli khothamo kangangokuba kufanele lo mkhuba uqhubeke nokuzalwa kabusha ekuthandweni.
1: Ingabe i-Arch isebenza kuzo zonke izitayela?
2, Yiziphi Ezinye Izindawo Ezivamile Zokufakwa Kwe-Arch Ezikhaleni Zangaphakathi?
I-3, i-Arch Yakha Ukusebenza Nokucatshangelwa Kwezindleko
Ungayisebenzisa Imengamo Kuzo Zonke Izitayela?
Nginike lo mbuzo umcabango othile, futhi impendulo ithi - kinda.
Yize isitayela esivame kakhulu saseYurophu, isiFulentshi, sesimanje sizobonakala kakhulu ekhothameni. Kepha ngokwenza, amaJapane anokhiye ophansi, waseMelika osemkhathini, empeleni enza idizayini enkulu.
Okulandelayo umnyango wendlu yomama wekhaya waseJapan, futhi kuyindawo enhle efana nokugcinwa kwekhabethe. Idizayini enengqondo futhi enemibala.
Esinye isibonelo, leli khothamo lesitayela laseMelika liguqulwa ngokuya ngesimo semishayo nezinsika zoqobo. Imishayo ibuthakathaka, kepha kukhona ukuhlukaniswa kwendawo yendawo.
Ekugcineni, i-arch ingasetshenziswa ngezitayela ezahlukahlukene ngenxa yalokho ekwenzayo.
Okokuqala, yenza buthaka ama-engeli futhi yenze ikhoneni lesikhala lithambe.
Okwesibili, iphuzu eliphakeme kakhulu le-arch lisondele ophahleni, okwenza libe lide kakhulu kunxande.
Okwesithathu, iqiniso lokuthi i-arch iyinhlanganisela yamaphethini wejometri amaningana enza ukwakheka kuthakazelise futhi kube nobuciko kunonxande owodwa.
Ingabe I-Arch Iyosetshenziswa Kuphi Ekhaya?
Ngemuva kwazo zonke izinzuzo, lapho kufanele uqale ukusebenza kuyo, izingane eziningi zisanqikaza: ngabe kukhona i-arch elula kunazo zonke ongayiklama okulula ukusebenza nayo futhi engakwazi ukungahambi kahle?
Ngalowo mgomo engqondweni, ngizihlelele izinto ezimbalwa, ngakho-ke ake sibheke izindawo ezithile ezivamile zokufaka isicelo se-arch ezindaweni ezingaphakathi.
Into elula ukuyenza, into yokuqala efika engqondweni yami yimigwaqo esekhaya lami.
Noma ngabe indawo yokungena.
Noma kunjalo iphaseji lephaseji, ngokungezwa kwamajika, lenza ukuthi indawo yokushintshela ithambe futhi isondele kakhulu.
Le villa enhle, indlela yokuhamba ephakathi kwegumbi lokudlela negumbi lokuhlala isebenzisa imengamo emibili ngaphambi nangemva kwayo, engabukeki isendulo, kepha futhi ingeza intshisekelo.
Futhi lolu hlobo lokufaniswa kombala uhhafu-arch, umqondo wokuklama uzoqina, udinga umqondo wobuciko wokusekela.
B. Vula Iminyango
Ushintsho olufana kakhulu ephaseji elingenhla yiminyango evulekile kwamanye amakamelo.
Isibonelo, leli gumbi lezingane elingeke libe umnyango okwamanje. Endabeni yamathoni ampunga ngaphandle, indilinga yamafreyimu eminyango emhlophe isetshenzisiwe ukuletha isikhala sangaphakathi, esihehayo futhi esinikeza ushintsho lwemvelo.
Kukhona futhi lolu hlobo lwekhabethe olufihlwe esikamelweni sokulala, nalo elifanele umnyango ovulekile.
Uma uzizwa ngempela ukuthi umnyango ovulekile unzima kancane, ungafunda inqubo elandelayo - engeza ikhethini! emmm… ukuvimba umbala kujabulisa ngokwengeziwe.
Khumbula ukufaka ikhethini ebubanzini obubonakalayo bohlangothi oluncane, gcina indwangu nayo ibe nomphumela omuhle, kusukela "ekhoneni elifihliwe".
C. Iminyango NeWindows
Abanye abantu bazothi, sebevele benza iminyango, kungani ungenzi amawindi nezicabha? Ukucushwa kwe-arch + lattice kanjena bekungeke kube yi-retro ethe xaxa?
Lokho kuyiqiniso, ngaphandle… iminyango namawindi ngokuvamile kusetshenziswa ngokufana ngemishini, futhi kunzima impela ukuthola umenzi owenza lezi zinkomba ezigobile. Noma ungazithola, zibiza kancane kunomnyango ojwayelekile.
Ikakhulukazi uma umbala nesitayela kufana nomcabango wakho, kunzima ukukuthola.
Ukuze uthole iminyango yamapaneli ayizicaba alula futhi athakazelisayo njengalena engezansi, uzodinga ukuchitha isikhathi esithe xaxa ukuze uqiniseke ukuthi unayo.
Ngakho-ke, uma ufuna iwindi noma umnyango, ngingahle ngisekele lokhu okungezansi, okuyisimo esijwayelekile esingunxande kepha esinezinto ze-arch ngaphakathi.
Futhi, inani lolu hlobo lwewindi nalo liphakeme impela.
D. Isibonisi seNiche
Eqinisweni, lolu hlobo lomsebenzi wokubonisa i-niche futhi lulula kunamawindi nezicabha, okufana nokushintshwa komhubhe neminyango evulekile engenhla. Sizokhuluma ngokuthi ungakwenza kanjani lokhu ezansi.
Noma kungumbukiso wokuhlobisa noma weshalofu, kusese kuhle kakhulu.
Ikakhulukazi uma imibala ixutshwe ngaphakathi nangaphandle, izokwakha ukubukeka okuthathu.
E. Amakhabethe Akhiwe
Kukhona nokusebenza okufana niche, lokhu kodwa kulokhu umzimba omkhulu yikhabhinethi.
Njengoba amakhabethe ngokuvamile ejulile kancane kunokuba ama-niches azoba, alungele kangcono ukwenziwa izindawo ezisebenzayo lapho e-arched.
Isibonelo, ibhentshi elincane elingezansi, liyakhazimula. Kubuye kube ngasese kakhulu.
Ukusebenza okulandelayo, ngakolunye uhlangothi, kubucayi kakhulu futhi kufaneleke kakhulu ezindaweni ezincane.
Odongeni olulodwa lwesitoreji, kumbiwe imengamo emibili.
Okukodwa kushumekwe etafuleni lokudlela.
Usofa onedokodo elakhelwe ngaphakathi.
Ukuqedela ukuguqulwa okuhle kwegumbi lokudlela lezivakashi elincane
F. Imibhede Yezingane
Kukhona nalomklamo ofanele amakamelo ezingane.
Ilungele imindeni enezingane ezimbili, futhi imibhede yombhede eyenziwe ngamakhothamo ibaluleke kaningi kunemibhede ejwayelekile ephezulu / ephansi.
Kukhona nesikhala segumbi lezingane elinezinsimbi ngokwengeziwe elenza indawo yokudlala eqondile.
Ngamafuphi, ukwakheka okuthakazelisayo kwe-arch kufana ngempela negumbi lezingane.
G. Impahla ethambile
Lezi zingxenye ezintathu zokupholisa zingenziwa ngesidingo esincane noma esingenasidingo sokubiza uchwepheshe, ngokuthenga imikhiqizo eyenziwe ngomumo.
Okokuqala okufanele ukushiwo yiphaneli elingemuva kombhede eliseceleni kombhede.
Lokhu kuvame ukuthathwa ngokukhethekile lapho kukhethwa umbhede, noma ungathola inkampani enesembozo esithambile ukuze wenze ngezifiso isizinda sekhava ethambile.
Futhi, lawa macala wokubukisa amakhasethi we-arched athandwa kakhulu kulezi zinsuku.
Uma unefenisha eyenziwe ngomumo ungakha lolu hlobo lwekhaya lobuciko, ngiyaqiniseka ukuthi abantu abaningi ngeke baluphuthelwe.
Okunye, umkhuba ovame kakhulu ukuthenga ngqo isibuko se-arched, uma ukuphakama kufanelekile, njengomnyango we-arch mirror, umphumela nawo uyamangalisa kakhulu.
Ekugcineni, isinyathelo sokugcina esisebenzayo.
Ukukala ukuthi yiziphi izinhlobo zamakhothamo okukhulunywe ngazo ngenhla okulula ukuzisebenzisa, uma bekufanele ukwenze, kungaba njalo.
Impahla ethambile ＞ Iphaseji namaphaseji = iminyango evulekile displays Imiboniso yeNiche ＞ Iminyango namafasitela
Futhi, uhlobo oluyisisekelo lwezindleko / lokusebenza luyafana nalokhu.
Ngemuva kwakho konke, lapho kuba nzima ukusebenza, izindleko ziya ngokwanda.
Ngaphandle kwengxenye ethambile, ikhothamo livame ukwakhiwa ngaphandle kokubambisana nombazi.
Isakhiwo sangaphakathi esivame kakhulu sizoqedwa nge "board board to frame" noma "plasterboard to shape".
Isithombe esivela kuZhiyou Xi'an Isochronous Design
Ngemuva kwalokho kumane kuyindaba yokwenza ukwelashwa kodonga ngendlela ejwayelekile.
Ungakwenza lokhu ngqo, nodonga ngombala owodwa - smear white.
Ungengeza futhi umbala kumbuthano we-arched kepha ngokwehlukana, okuku-ntathu.
Kukhona nalokhu ukusetshenziswa kwama-aluminium amafreyimu eminyango emincane, esebenza kahle ngokuphelele.
Ngamafuphi, uma ufuna ukudlala ubuciko obuncane ekhaya, i-arch isengukukhetha okuhle.
Uma kunezimbobo eziningi zobuchopho, kukuwe ukuthi udlale, wamukelekile ukushiya umyalezo bese ungitshela ngakho.
Umthombo wento yesithombe embhalweni.
Edlule :: I-Minimalism Yokukhanya Nobukhazikhazi I-Aesthetic Ephezulu! Olandelayo: Amamitha ayi-50 Esikwele Wendlela Yesimanje Yesitayela Esiphezulu, Amathuba Okuvula Ihhovisi Okungenamkhawulo | IJUDESIGN House Union Design
2020 / 11 / 17 527
2020 / 11 / 16 569
2020 / 11 / 10 608